Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2191 - 2192 | XperimentalHamid
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2191 - 2192
Aprili 10, 2021 by I-Hisam Ullah
funda Isahluko 2191 - 2192 yenoveli Unyana osisigidi eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
Xa u-Issac weva lo myalelo, kwangoko wakhwaza ngaphandle kwamathandabuzo: “Kulungile Mnu. Wade, ndiza kulungiselela inqwelo moya ukuba ibase eSierra Leone. Ngelo xesha, umntu okhethekileyo uya kulungiselelwa ukuba abagade iiyure ezingama-24 ngosuku iintsuku ezisixhenxe ngeveki, kwaye abasayi kuba nethuba lokusinda! ”
UCharlie wanqwala ngentloko ngolwaneliseko, wakhomba kuHashimoto ecaleni kwakhe, wathi, "Hi ke, mhambise lo mhlobo waseJapan."
Xa uHashimoto wakuva oku kuqala, woyika kakhulu waze walila kabuhlungu. Walila waza wacenga esithi: “Mnu. Wade, lo mbandela wenziwe ngutata nonyana ngokupheleleyo. Bobabini ziingcinga eziphambili. Ndisisitya nje. Nceda ungandithumeli nantoni na eSierra Leone, ndicela undiyeke ndihambe! ”
UCharlie wahlekisa wathi: “Hashimoto, awuyongqondongqondo, kodwa loo nto ayikwenzi ube ngaphantsi komoni. Uhlobo lolwaphulo-mthetho lwakho nalo lulubi kakhulu. ”
Emva koko, uCharlie uxelele u-Issac kwakhona: “Mnu. U-Issac, qiniseka ukuba ufika eSierra Leone kunye nonyana noyise. Andifuni kuncinci unyango kuye. Mphathe ngokulinganayo njengabo. Makungabikho calulo, uyaqonda? ”
U-Issac wanqwala ngaphandle kokuthandabuza wathi, “Mnu. Wade, ungakhathazeki, ndiza kwenza amalungiselelo afanelekileyo! ”
UCharlie wajika wajonga kuJim Song, ixhego, wabuza, “Mhlekazi, wanelisekile yile ndiyenzayo ngam?”
Ubawo Ingoma uchithe ubomi bakhe bonke ezivenkileni enokhuseleko olululo kunye nezenzo eziqinisekileyo. Xa weva ukuba iTianming kunye neMbeko bazokumhlasela, wazilungiselela ngasese ingqondo yakhe ukuba xa lo mbandela ujikile, hew akasoze abuye.
Kodwa xa ebona yonke into isenzeka phambi kwakhe, waqonda ukuba ngekhe angabinamdla kwaphela.
Emva koko, bangoonyana bakhe kunye nabazukulwana. Ukuba bababulala ngenene, iya kuba yintlekele yosapho. Njengokubulala abancinci yindoda endala ebuthathaka.
Njengoko intetho isitsho, ingwe enetyhefu ayibadli abantwana. Nangona bekukho oonyana ababulala ooyise kule minyaka idlulileyo, bambalwa ootata ababulala oonyana babo.
Nangona ubomi bungenamda, kodwa ngapha koko, kunzima ukubaleka amazwi e-avarice.
I-avarice yeyona ineminqweno engapheliyo kunye neminqweno.
Ngomzuzu obalulekileyo, uthando olungapheliyo lwenyama negazi yingxaki kaMnu.
Kwakungenxa yale nto wayenokuthi anikezele aba bantu babini kuCharlie.
Ngoku, uCharlie wagqiba kwelokuba abathumele eSierra Leone. Nangona iimeko zazinzima kakhulu, kuhlalutyo lokugqibela, babesaphila ubomi babo.
Oku kukwavumela iNgoma endala ukuba iphefumle ukukhululeka.
Ke, ngokungxama wathi kuCharlie ngentlonipho: “Mnu. Wade, nokuba ungathatha siphi isigqibo, andinamazwi! ”
UCharlie wanqwala, emva koko wabuza uWarnia, “Warnia, unazo izimvo? Ukuba unazo naziphi na izimvo, ziveze. ”
UWarnia naye ngokungxama wathi: “Mnu. Wade, andiphikisi, yonke into ixhomekeke kuwe! ”
UCharlie uthe: “Njengokuba wonke umntu engenachaso, landela oku, Mnu. Issac, bayeke abantu bakho babase e-Afrika. Andizifuni ezi ndawo zamehlo apha. ”
U-Issac wakhawuleza wayalela abantu abambalwa abamnyama: “Bathathe bobathathu phantsi kweliso elibukhali! Akukho mpazamo zivunyelweyo, uyaqonda? ”
Wonke umntu ungxamile wathi: "Siyaqonda!"
Emva koko, wabakhapha aba bantu baphuma.
I-Tianming kunye ne-Honor bebelila kwaye becela inceba. UTianming wajika wajonga kuMnu.Ngoma wakhala wathi: “Tata… nceda, ngenxa kabawo nonyana wethu, ndincede. Ndiyakucela Mnu Wade, ndicela undisindise! Ngaphandle koko ndingafela eSierra Leone, Tata! ndicela wenze into ”
Ingoma endala yeva intlungu entliziyweni yakhe.
UCharlie uthe, mabahlale eSierra Leone iminyaka engama-20. I-Tianming iwele iminyaka engama-50 kulo nyaka. Xa esiya kwindawo engaphuhliswanga kwaye ihlwempuzekile eSierra Leone, usenokungakwazi ukuphila iminyaka engama-20.
Kulindeleke ukuba asweleke eSierra Leone ngaphambi komhla obekiweyo weminyaka engama-20.
Ke ngoku eli inokuba lixesha lokugqibela utata nonyana bejongana ebomini babo.
Imilenze kaHonor Ingoma ibixhuga ngeli xesha, kwaye warhuqwa nabanye. Wacenga kabuhlungu: “Tamkhulu… ndineminyaka engamashumi amabini kuphela. Andifuni elona xesha lilungileyo ebomini bam ukuba ndivalelwe eSierra Leone, ndicela undincede… Tatomkhulu! ”
Intetho kaTata Ingoma yayinzima kwaye iphazamisekile, uCharlie wangxola ngeli xesha: "Ndivalele yonke imilomo yabo ngenxa yam!"
Abantu abambalwa abamnyama bavale imilomo yabo ngento enokubenza bangathethi, kwaye indawo leyo yaqala yathula ngoko nangoko.
Emva koko, bathathu bakhutshelwa ngaphandle.
Ukubona le nto, uMnumzana Ingoma wancwina ngokunzulu, esazi ukuba akukho ndlela yokwenza, ngokungathi wayeneminyaka engaphezu kweshumi ngaxeshanye.
UCharlie wayeyibona kakuhle intsebenzo yakhe, wanikina intloko kancinci, wathi ngokuvakalayo: “Ingoma kaMaster, uyayiqonda inkqubo yokufuya izingwe ngcono kunam. Kuya kufuneka ungaziqwalaseli nje wena, kodwa ulumke. Ukuba aba bantu babini banenkathazo abasuswanga, ngenye imini kwixa elizayo emva kokuba umkile, bobabini baya kuba sisoyikiso esikhulu kuWarnia!
Emva koko, uCharlie wancuma kancinci waqhubeka: “Ukuba nje mna, Charlie, andizukuvumela abo babini bamoyikise uWarnia. Oko kukuthi, ukuba bobabini bahlala bebanzi, baya kuhlasela iWarnia kwakhona kwixa elizayo. Ngelo xesha, andizange ndibavumele ukuba bahambe. Ke, xa sithetha ngako, ukuvalelwa kwabo eSierra Leone ayikokukhusela iWarnia, kodwa kukubagcina bephila, kungenjalo baya kutshiswa babe luthuthu ukuba bangena emlilweni! "
Umnumzana Ingoma wamangaliswa kwaphela, wakhawuleza wajonga eWarnia, wakhawuleza wathi kuCharlie, “Mnu. Wade, ulungile! Bavumele baphile baze bafe eSierra Leone! ”
Emva kwayo yonke loo nto, uMnu. Song waphinde wajonga kuWarnia wathi: “Warnia, oko ubuyile ngoku, isikhundla sokuba ngusihlalo weQela leNgoma ngokwemvelo sesakho. Ukusukela ngoku uzakuqhubeka nokongamela imicimbi yeQela leNgoma. ”
UWarnia wanqwala ngentlonelo: "Kulungile Tatomkhulu, uWarnia uyifumene."
UTatomkhulu uNgoma uyaleze: “Warnia, utatomkhulu akaceli ukuba uthathe iqela losapho lweNgoma kumlo oqatha, ukuba nje ungazinzisa imeko ekuyo kwaye uthintele iqela losapho leNgoma ukuba lingehli, utatomkhulu uyoneliseka, ke ukuba awufuni, ndiza kuthetha ngokurhoxisa intsebenziswano yamazwe. Ndingathanda ukuba iNgoma yeQela ingavuli naziphi na iimarike zaphesheya okanye isebenzisane nazo naziphi na iinkampani zaphesheya, kwaye andifuni ukuba uphinde uwele kwimeko enobungozi, uyaqonda? ”
UWarnia wanqwala kancinci wathi, “Sukuba nexhala, makhulu, ngokuqinisekileyo ndiza kunika ingqalelo ngakumbi kukhuseleko lomntu kwixa elizayo. Ukongeza, ndicinga ukuba sinokuqhubeka nokusebenzisana neenkampani zaphesheya. Ukuthintela akuyiyo eyona ndlela ilungileyo apha. ”
Emva kokuthetha, uye wema kancinci wathi: “Ngeli xesha, uMnu. Wade undincedile ndathetha ngentsebenziswano neNippon Steel. Usihlalo weNippon Steel, uWatanabe Shinkazu, utyikitye isivumelwano sokusebenzisana nam eJapan. Phantsi kwesivumelwano, la maqela mabini aza kuseka ubambiswano lokwakha umzi-mveliso kunye nokutyala imali kwi50-50 ratio, kodwa iNippon Steel izimisele ukunika ama-60% ezabelo kwiqela lethu lengoma. ”
"Intoni?!" Athi nje ukuba aphume la mazwi, wonke umntu owayelapho wothuka wangathethi.
I-Nippon Steel ibisoloko yomelele kakhulu kwintsebenziswano yamanye amazwe. Bayathandabuza nokuba banike i-51% yesibonda sokulawula. Nokuba iQela leNgoma linika i-60% yengeniso kwiNippon Steel, iNippon Steel iya kuhlala ingathandi. Ukunikezela ngamalungelo okulawula ayisiyo indlela abasebenza ngayo.
Ke ngoko, emehlweni abo bonke abakwindawo, iNippon Steel lelona thambo kunzima ukuhlafuna.
Nangona kunjalo, uWarnia uthe i-Nippon Steel ngoku ayizimiselanga kuphela ukunikezela ngamalungelo olawulo, kodwa ikwazimisele nokunika i-10% yezabelo kwiqela leNgoma. Eli liphupha nje!
iindidi Inveli tags Bhuka i-Millionaire Son-in-Law PDF, incwadi usozigidi umkhwenyana pdf simahla, Unyana osisigidi eMthethweni, Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho, Usozigidi-mkhwenyana PDF, Unyana omangalisayo eMthethweni, Unyana oMangalisayo kuMthetho wePDF, Unyana osisigidi eMthethweni, Incwadi yoNyana kaMyeni kaMillionaire, inoveli yomyeni-usozigidi, usozigidi umkhwenyana pdf Post yokukhangela
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2189 - 2190
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2193 - 2194
Joyina amanye ama-25,090 ababhalisile